Izixhobo ze-Android-iifowuni, iitafile, iwatchwatch kunye nokunye! | I-Androidsis (iphepha 35)
I-HTC One E9 +, ityhilwe ngokusemthethweni
I-HTC ihambise ngokusemthethweni i-HTC One E9 +, i-HTC One M9 enescreen esingcono kunye nokugqitywa kweplastiki okujolise kwimakethi yaseAsia.
I-Galaxy S6 Edge iyamelana namanzi, oku kuboniswa yividiyo
I-Galaxy S6 Edge ayinamanzi ngokwenene kwaye oku kuboniswa ngevidiyo yoVavanyo lweDrop olwenziweyo kuyo.
I-Jiayu S4, i-4.7-intshi ye-64-bit terminal kunye nohlobo C lwe-USB
Imifanekiso eliqela yoyilo lwesiphelo sendlela ezayo yeJiayu S4 sele ivuziwe, kunye nokucaciswa kwayo kuvuza.
Ungayithenga njani i-HTC One M9 eSpain?
Siza kukubonisa indlela yokuthenga i-HTC One M9 eSpain ngokukhawuleza nangokulula. IAmazon ikuvumela ukuba uyigcinele i-euro ezingama-749!
IMotorola ayinamdla wokukhupha ithebhulethi, okwangoku
Inkampani yaseMelika i-Motorola ibhengeze ukuba abanamdla, okwangoku, wokwenza ithebhulethi.
I-LG G2 Flex iphantsi kwazo zonke iintlobo zovavanyo lokwehla
Isixhobo samva nje esivela kwinkampani yaseMzantsi Korea, i-LG G2 Flex ifumene zonke iimvavanyo zokuwa.
Hayi, i-HTC One M9 ayisasebenzi. Lo mfanekiso uyakungqina oko
Umfanekiso omtsha ubonakalisa ukuba i-HTC One M9 ayisenangxaki yobushushu emva kohlaziyo olufunyenweyo
IBenchmark yeZTE Nubia Z9 Max ibonisa amandla ayo
Isiphelo esitsha esivela kwinkampani yaseAsia, iNubia Z9 Max, sibonisa ukuba ukongeza kwisiphelo esiyilelwe kakuhle, sinamandla kakhulu.
UOlio ngumdlalo wewotshi oxabisa i $ 600
U-2015 uzakuba ngunyaka apho iiwotswat smart zisuka khona, sele bebaninzi abavelisi abanomdla wokudala ezabo, ezinje ngeOlio's, iwotshi eguquguqukayo kodwa ebizayo.
Ngaba le yindlela kaMeizu yokuhlaziya izixhobo zayo kwi-Android 5.0?
Imephu yendlela ebonisa imihla apho ii-terminals eziphambili ze-Meizu ziya kuhlaziywa kwi-Android 5.0 iye yavuza
Ibhetri ye-Galaxy S6 Edge ihambisa, ngokweBenmarkmark
Ibhetri ye-Galaxy S6 Edge, eyi-2600 mAh kuphela, inika iziphumo ezilungileyo kakhulu ngokweemvavanyo ezenziwa kwisiphelo sendlela.
I-Moto X elandelayo ye-2015 inokuphuma ngo-Agasti
I-CEO ye-Motorola, ibhengeze ukuba uluhlu lwezixhobo ze-Motorola ziya kuhlaziywa minyaka le, ke iMoto X 2015 iphuma ngo-Agasti
Isinyithi okanye izindlu zeplastiki, ngumbuzo lowo
Ukuba impikiswano malunga ne-Samsung kunye nokwala kwayo amatyala esinyithi isonjululwe, ngoku iyavuselelwa ngokubhengezwa kwe-LG G4 Ngaba sinesinyithi njengeyona nto iphambili?
Isamsung iqinisekisa ukuba kunokwenzeka ukuba ngo-2016 kuya kubakho ii-smartphones ezinezikrini eziguqukayo
Kudliwanondlebe nephephandaba laseKorea Bussiness, iSamsung yatsho ukuba iyakukwazi ukwenza iifowuni zokugoba ngo-2016
Ngaba i-LG G4 iya kujongeka ngathi kukunye kwezi zinto zibonelelweyo?
Ngelixa silinde umboniso osemthethweni weflegi elandelayo ye-LG, i-LG G4, sikushiya nonikezelo malunga nokuba i-terminal yaseMzantsi Korea izakuba njani.
UXiaomi Ferrari unokuba ngumlandeli weRedmi 2 yangoku
UXiaomi Ferrari unokuba ngumlandeli weRedmi yangoku. Isiphelo sinokuba ne-2 "intshi yesikrini kunye ne-4,9-bit Snapdragon 615.
Uyidibanisa njani i-Samsung Galaxy S6, kwividiyo
Kule vidiyo babonisa inkqubo yokudibanisa i-Samsung Galaxy S6, i-terminal ethi ngenxa yokutywina okusebenzisayo kuya kuba nzima ukuyilungisa.
Inqaku leLenovo K3 linikezelwa ngokusemthethweni
Inkampani yaseTshayina iveze i-terminal yayo elandelayo iLenovo K3 Qaphela, i-terminal enezinto ezilungileyo eziza kuba nexabiso elifikelelekayo.
Amaxabiso e-Smartphone eYurophu Apho kubiza ixabiso eliphantsi ukuthenga?
Ukuba ukhe wazibuza ukuba zingakanani iindleko zeefowuni ozithandayo kwamanye amazwe, namhlanje sikubonisa igrafu eza kuphendula imibuzo yakho.
Imveliso ye-Samsung Galaxy S6 iqala e-India
Zombini i-Samsung Galaxy S6 kunye ne-Samsung Galaxy S6 Edge ziya kuveliswa kumzi-mveliso we-Samsung e-India, ukusasaza iiterminal eYurophu.
Ukungangqinelani okungafanelekanga kwe-iOS nge-Android Wear kunokubonwa kwenye ividiyo
Kukhutshwa enye ividiyo ye-iOS engahambelaniyo ne-Android Wear.
I-HTC One M9 ngoku ifumaneka eTaiwan
Ngoku abafana baseHTC basombulule ingxaki ngohlaziyo lwesoftware, sele beyibekile i-HTC One M9 kwintengiso eTaiwan ngexabiso elinomdla kakhulu, nangona bengalindelanga ukuba iza kufika eSpain ngexabiso elingaphantsi kwama-749 eeuros.
IMeizu kunye neNokia ziya kusebenza kwisixhobo, iMeizu Ephakamileyo
Kubonakala ngathi inkampani yaseFinland iNokia kunye nenkampani yaseTshayina iMeizu bazakusebenza kwisixhobo esibizwa ngokuba yiMeizu Supreme.
Isoftware ye-OTA ye-HTC One M9 inciphisa iqondo lobushushu nge-15 degrees
Umsebenzisi we-XDA ubhengeze ukuba i-HTC One M9 yakhe ifumene uhlaziyo lwesoftware elinciphisa ubushushu besiphelo nge-15 degrees.
Ukucoca imifanekiso emitsha yeHuawei inyuka ngeP8
Umfanekiso omtsha weHuawei unyuka nge-P8 uvuziwe, ubonakalisa ubume besiphelo kunye nobungakanani ngqo be-P8 entsha
I-HTC One M7 ayizukufumana u-Android 5.1 enkosi kuGoogle nakwiHTC!
I-HTC ibhengeze ukuba i-HTC One M7 ayizukufumana i-Android 5.1. Ityala? Ukusuka kuGoogle kunye nohlaziyo oluqhubekayo ukulungisa iimpazamo kunye neebugs.
I-Moto 360 ilungile ukuba ibe ngumlindo weepokotho
IMoto 360 ethandwayo kuyilo lwayo, icala layo elijikelezileyo lisikhumbuze iwotshi eqhelekileyo yexesha lokuphila kwaye sele kukho abantu abayisebenzisa njengewotshi epokothweni.
Njani ukuba unyothule LG G3 kwi Android Lollipop
Amanyathelo alula ngenyathelo ngenyathelo lokufunda ukuze ufumane i-LG G3 kwi-Android Lollipop.
[ROM] Uyihlaziya njani i-LG G2 kwi-Android esemthethweni yeLockipop usebenzisa iRom ephekiweyo
Namhlanje sikulethela enye yeendlela ezilungileyo zokuhlaziya i-LG G2 kwi-Android Lollipop esemthethweni yeStock, indlela ayikho enye ngaphandle kweRom ephekiweyo esekwe kwi-firmware yoqobo ye-Android 5.0.1 LG Lollipop
Ezona zixhobo zi-5 zibalaseleyo zokunika ngemini kaTata
Ngaba awusazi ukuba uza kunikela ntoni ngoMhla kaTata? Sikuzisa ezona zixhobo zi-5 zibalaseleyo zokunika ngalo mhla.
Thelekisa iifoto ezithathiweyo nge-Samsung Galaxy S6 Edge kunye ne-iPhone 6 Plus
Thelekisa phakathi kwezinye izinto ezithathiweyo kunye nekhamera ye-Samsung Galaxy S6 kunye nezinye ezithathwe ngekhamera ye-iPhone 6 Plus
Sele bekwazile ukuyisiphula i-Samsung Galaxy S6 kunye ne-S6 Edge
Iqela leChafirefire libhengeze ukuba sele likwazile ukuyisusa i-Samsung Galaxy S6 kunye ne-S6 Edge ngenxa yesicelo sayo seCF Auto-Root.
[APK] Khuphela uze ufake usetyenziso lwegalari ye-Motorola nakweyiphi na i-Android terminal
Emva koko ndicacisa indlela yokufaka isicelo segalari ye-Motorola nakweyiphi na i-Android terminal kwaye ngaphandle kwesidingo seNgcambu.
I-Samsung Galaxy Tab A kunye ne-Tab A Plus zenziwe ngokusemthethweni
Isamsung yazisa iipilisi ezimbini kuluhlu lweTab, i-8-intshi yeGlass Tab kunye ne-9-intshi Tab A Plus, eRashiya.
Isamsung Orbis, iGlass Gear elandelayo inokuba sisangqa kunye nekhamera
Isamsung Orbis iya kuba kukubheja kwe-Samsung entsha, iSouth Korea isebenza ngewotshi ejikelezayo enekhamera ekwaziyo ukubona izinto.
I-HTC One M9 ishushu kakhulu xa ithelekiswa nabantu abakhuphisana nabo
Iindaba ezimbi ziza kuthi ze-HTC One M9 kwaye kukuba, ngokokuvavanywa okuthile, i-terminal ishushu kakhulu xa kuthelekiswa nezinye izixhobo ezikuluhlu olufanayo.
[Infographic] Siphonononga imbali yoluhlu lwe-Samsung Galaxy S
I-Samsung Galaxy S ibe yeyona nto ithengiswa kakhulu, i-1 kwii-smartphones ze-3 ezithengisiweyo zezabo, ngenxa ye-infographic esinokuthi siyibone imbali yabo.
I-Android 5.1.1 sele ivavanywa kwi-Nexus 5
Kuyathakazelisa ukuba kwiiveki nje ezimbalwa ezo zeMountain View zibhengeze ingxelo entsha ye-Android ngoku ebonakalayo enye, ngakumbi i-Android 5.1.1
Inqaku leMeizu M1 liza kufika eSpain kwaye linokubiza imali engaphantsi kwama-euro angama-200
Inqaku leMeizu M1, esinye sezona ziphelo zibalaseleyo ngokwexabiso lemali, liya kufika kwimarike engaphantsi kwama-200 euros
IMicromax isungula umabonakude we-Android TV 4K eIndiya ngexabiso elikufutshane ne- $ 640
Ngexabiso eliqikelelweyo le- $ 640 Micromax libonisa umabonwakude we-4K nge-Android TV eIndiya. Ubhejo omtsha nge-TV ye-Android apho ukongezwa khona okungakumbi
I-Android 5.1 iphucula ukusebenza kweNexus 6
Uhlaziyo olutsha lwe-Android 5.1 Lollipop luphucula ukusebenza kweflegi yoluhlu lweNexus, iNokia Motorola 6.
I-LG inokuqalisa i-5-intshi Phablet kwakamsinya
Umvelisi we-LG, uza kuba ekuqaliseni i-phablet phantse ye-6 "intshi yesikrini ukukhuphisana noluhlu lweNqaku leSamsung.
Sithelekisa i-LG G Watch R kunye ne-Apple Watch
Senza uthelekiso phakathi kwewotshi ye-LG G R kunye ne-Apple Watch apho sithetha khona malunga nobubi kunye nobubi bazo zombini iiterminal. Nguwuphi owukhethayo?
Yenza i-Moto 360 yakho ngaphambi kokuba uyithenge nge-Moto Maker
Ngomenzi weMoto, isixhobo esitsha esinikezwe yinkampani yaseMelika, ungayilungisa iMoto 360 ngaphambi kokuyithenga.
I-Android Wear iya kuba nolawulo lomzimba kunye nenkxaso engcono ye-Wi-Fi kuhlaziyo lwayo olulandelayo
I-Android Wear iya kufumana amanqaku amatsha kuhlaziyo lwayo olulandelayo, phakathi kwawo ulawulo lwesimbo kunye nenkxaso engcono yeWi-Fi iya kubonakala.
I-Sony Xperia Z4 ineengxaki ezinkulu zokulawula ubushushu
I-Xperia Z4 inika inkampani izoyikiso ezimbalwa kuba ayikwazi ukulawula ubushushu.
Thelekisa iApple Watch vs LG Bukela iUrbane
Sibeka iApple Watch ecaleni komnye nomnye ngokuchasene ne-LG Watch Urbane, izinto ezimbini ezinxitywayo ezinemilo yesikwere kunye nenye isetyhula
I-YotaPhone 2 iya kuhlaziywa kwi-Android 5.0 Lollipop kwaye iya kuba neenguqu ezingenanto
Izixhobo zeYota zibhengeze ukuphuculwa kweYotaPhone 2. Hlaziya kwi-Android 5.0 Lollipop, usetyenziso olutsha kunye nohlobo olumhlophe lwesixhobo.
I-Samsung Galaxy S6 icacisa ukuba ungayitshintsha njani ibhetri kwincwadi yayo yomsebenzisi
Nangona ngokomgaqo i-Samsung Galaxy S6 ingenayo ibhetri efikelelekayo yomsebenzisi, umsebenzisi angayitshintsha kunye neenkcazo kwincwadi yomsebenzisi.
I-Huawei Bukela i-odolo yangaphambi kwee-euro ezingama-999 Ixabisa malini kwi-smartwatch?
Ixabiso langaphambi koku-odola iHuawei Watch eAmazon eJamani yoyike abaninzi, nangona inkampani igxininisa ukuba iyakubiza imali engaphantsi kwe- € 999 yokubhukisha.
Ukunyuka kwee-smartwatches zokunethezeka Ngaba sijongane nebhamu entsha?
Ukuba i-Apple ayothusi kakhulu ukuzama ukungena kwicandelo le-smartwatch, ezinye iimveliso ezinje ngeHuawei. Ngaba sijongene nebhola entsha?
I-HTC One M9 Plus yasendle yavela!
Imifanekiso emitsha ye-HTC One M9 Plus icociwe, isiphelo sendlela esiya kubonakala kwiscreen sayo se-2K kunye neminwe yayo yeminwe
Imbeko ibhengeza ukufika ngokusesikweni kwe-Honor 4X kunye ne-Honor 6 Plus eYurophu
Imbeko ibhengeze ukuba bobabini i-Honor 4X kunye ne-Honor 6 Plus bazakufika ngokusemthethweni eSpain.
IHuawei inokwenza iNexus elandelayo
Kudala sive amarhe malunga nesizukulwana esitsha seNexus. Ngoku, njengoko ipapashwe yi-web portal GizmoChina, iHuawei iya kwenza enye yeNexus entsha.
I-Kyocera Torque, i-smartphone yokuqala enganyangekiyo evela kulo mvelisi waseJapan ukumilisela eYurophu
IKyocera ifikelela kwintengiso yaseYurophu ngeTorque enganyangekiyo ehlangabezana neemfuno zomkhosi eziyi-810G
Sivavanya kwividiyo iTouchwiz entsha kunye nehlaziyiweyo ye-Samsung Galaxy S6
Sikubonisa kwividiyo ukuba inguqulelo entsha ye-Touchwiz interface ye-Samsung Galaxy S6 ihamba kwaye iphendula njani.
I-MyWigo V8, i-smartphone yaseSpain eza kukhuphisana namakhwenkwe amakhulu
I-MyWiGo V8 sisixhobo esisebenza ngoku se-Android se- € 349, esiphuhliswe yinkampani yaseValencian. Yonke imveliso enkulu
MWC 2015: OS sibonisa uMoya we-LG kwividiyo
Sikubonisa uMoya we-LG kwividiyo evela kwi-LG satnd kwi-MWC 2015 e-Barcelona.
Imbeko 6, ukubonakala kokuqala kwefowuni yeHuawei enamandla
Sihlalutya iNhlonipho 6, ilungu elitsha kuluhlu lwaseYurophu lwaseHuawei olunezinto ezinomtsalane ngexabiso lokuqhekeka komhlaba
[Ividiyo] I-Telefónica izisa kwi-MWC15 Filip, iSmartwatch yabantwana ukuze bahlale bekho
Namhlanje ukusukela kwi-MWC15 eBarcelona, ​​sibonisa uFilip, iSmartwatch yabantwana ethi iTelefonica izakuyisungula kungekudala ukuba ibe neyona ndlu incinci.
I-HTC One M9, ene-Snapdragon 810 SoC, ishushu kwi-MWC
I-HTC One M9 ene-Snapdragon 810 SoC ngexesha le-MWC 2015 ihlupheke ngenxa yemicimbi etshisayo. Ngaba unengxaki nge-Snapdragon 810?
I-NVIDIA Shield ifika, ikhonsoli ngeTegra X1 kunye ne-Android TV 4K ye- $ 199
I-NVIDIA Shield ifika nayo yonke into enokubakho enikwa yi-Tegra X1 chip kunye nemultimedia ye-Android TV
I-Hisense King Kong, i-smartphone enganyangekiyo ene-4G
I-Hisense King Kong yifowuni etsala umdla wokuchasana kakhulu nokuwa kunye nokuwa
I-ZTE Blade S6, isiphelo esihle kakhulu see-euro ezingama-200
Sihlalutya i-ZTE Blade S6, i-terminal eneprosesa yeQualcomm Snapdragon 615 kunye nekhamera ye-13 megapixel ngexabiso eliqhekezayo: i-200 euros.
Hlonipha i-6 kunye, uyilo olugqwesileyo kunye nenye yeekhamera ezintle kwimarike
Sihlalutya i-Honor 6 Plus, i-flagship yangoku ye-Huawei's new Honor line kwimarike yaseYurophu kwaye imele ikhamera yayo enamandla
I-ZTE Spro 2, sivavanye eyona projekti ye-android inomdla kakhulu
Sikuzisa uhlalutyo lwe-ZTE Spro 2, iprojektha encinci ye-Android yomenzi waseAsia ethe yamkelwa kakuhle kwi-MWC 2015
Sikubonisa i-LG Bukela i-Urban iwotshi ekrelekrele yomzuzu «ngaphandle kwe-Android Wear»
Sikubonisa kwividiyo i-LG Watch Urban entsha, i-smartwatch ye-LG ephuma kwi-Android Wear kwaye ibaleke nge-WebOS.
I-Samsung Gear VR Innovator Edition, ukubonakala kokuqala
Uhlalutyo lweSmart Gear VR Innovator Edition, igajethi ethi, kunye ne-Samsung Galaxy S6 / S6 Edge, isibeke ngokupheleleyo kwinyani ebonakalayo
Sikubonisa kwividiyo ukuba i-Z3 iqengqeleka nge-Lollipop esemthethweni ye-Android 5.0.2 Sony
Siza kukubonisa kwividiyo ukuba kanjani uhlaziyo olusemthethweni kwi-Android 5.0.2 Lollipop yeXperia Z3.
I-MWC 2015: I-Lenovo Vibe Shot Ikhamera ye-Lenovo ye-Smartphone
Ukusuka kwi-MWC15 sikubonisa kwividiyo iLenovo Vibe Shot, okanye yintoni enye, ikhamera etye i-smartphone ngenkqubo yokusebenza ye-Android 5.0.2 Lollipop.
I-Sony Xperia Z3 ibonwe nge-Android 5.0.2 Lollipop kwi-MWC
Uluhlu lonke lwe-Xperia Z luya kuba nenxalenye ye-Android 5.0.2 Lollipop yenyanga kaMatshi, njengesandulela sevidiyo yeXperia Z3
MWC 2015: LG Magna kwividiyo. Inomdla we-Android ophakathi
Ukusukela kwi-MWC 2015 eBarcelona sivavanye i-LG Magna, i-terminal entsha ye-Android ekumgangatho ophakathi ngexabiso elifikelelekayo.
I-MWC 2015: Sikubonisa i-Sony Xperia M4 Aqua, isiseko esingama-64 se-Octa esivela kwaSony esingaphantsi kwama-300 euros
Ukusukela i-MWC 2015 ibibanjelwe e-Barcelona sikubonisa kwividiyo i-Sony Xperia M4 Aqua, yonke i-Sony Octa Core engaphantsi kwama-300 euros.
MWC 2015: Sivavanye i-Sony Xperia E 4G, isiphelo sendlela esiphantsi sikaSony
Ukusukela i-MWC 2015 kuvavanywe i-Sony Xperia E 4G, isiphelo esisezantsi sendawo yakwaSony, eyakhelwe ngeplastiki kwaye kubonakala ngathi yaphuka ngokuyijonga.
MWC 2015: Sivavanye i-Huawei's TalkBand B2
Sisesitendi sikaHuawei eMWC 2015 ngeli xesha kuvavanywa iHuawei entsha yeTalkBand B2, ubuchwephesha bobugcisa obutofotofo okanye ubungakanani bokulinganisa ngesakhiwo esihle.
MWC 2015: Sivavanye i-Huawei MediaPad X2, i-Huawei enamandla ye-Octa Core
Ukusuka kwindawo yokuma eHuawei eMWC 2015 eBarcelona sivavanye iHuawei MediaPad X2, ithebhulethi enamandla yeOcta Core yoyilo olwahlukileyo.
I-MWC 2015: I-LG Leon iboniswe e-Barcelona
Ukusuka kwi-MWC 2015 e-Barcelona sivavanye i-LG Leon entsha kwividiyo, i-terminal eyenzelwe i-Android esezantsi, emiselwe ukulwa kwinqanaba eliphantsi le-Android ngokuchasene neMoto Moto E 2015.
Ifowuni entsha yeBlackphone 2 kunye neBlackphone + zifika kwi-MWC
IBlackphone iza neemodeli ezimbini ezintsha, ithebhulethi eneBlackphone + kunye ne-smartphone eneBlackphone 2
I-MWC 2015: Ukujongwa kwevidiyo kwi-LG G Flex 2, i-LG's curved terminal
Ukusuka kwi-MWC 2015 eBarcelona sajonga ividiyo kwi-LG G Flex 2, ngokungathandabuzekiyo yenye yezona ndawo zinomdla kakhulu kule MWC kunye nomtsalane omkhulu we-CES ezidlulileyo kwi-LA Vegas.
I-MWC 2015: Iimpawu ezimbini ezinomtsalane zekhamera ye-Samsung Galaxy S6
Njengoko ubona kule vidiyo idutyulwe kwisiza kwi-MWC 2015, sikubonisa izinto ezimbini ezizodwa zale khamera intsha kwi-Samsung Galaxy S6. ngaphandle kwamathandabuzo enye yamandla ayo.
I-MWC 2015: Ukunxibelelana ne-Samsung Galaxy S6 kwividiyo
Ukusuka kwi-MWC 2015 e-Barcelona sikubonisa i-Samsung Galaxy S6 kwividiyo, eyona nto iphambili kwilizwe laseKorea kwizandla zakho.
I-Samsung Galaxy S6 Edge, sihlalutya kwividiyo i-smartphone yokuqala enescreen esigobileyo
Namhlanje sikuzisa uhlalutyo lwevidiyo ye-Samsung Galaxy S6 Edge, isixhobo sokuqala kwimarike enephaneli egobile kabini. Ngaba kufanelekile ukuhlawula ngaphezulu?
I-Sony Xperia M4 Aqua ibhengeze nge-64-bit Snapdragon 615 chip kunye nekhamera ye-13MP
I-Sony Xperia M4 Aqua ibhengezwe ngokusesikweni yinkampani yaseJapan kwi-Mobile World Congress
Ithebhulethi yakwaSony Xperia Z4 ngoku isesikweni kunye nescreen se-10.1, 2K kunye ne-Snapdragon 810 chip
USony ubhengeze isixhobo sayo esitsha i-Xperia Z4 yeCwecwe eline-10.1 "yesikrini kunye ne-Snapdragon chip kwi-Mobile World Congress
I-HTC One M9 ityhilwe ngokusemthethweni
Inkcazo esemthethweni ye-HTC One M9 ifikile, iflegi entsha yomvelisi waseTaiwan oza kukhuphisana ne-S6 kwi-MWC
[APK] Zama phambi kwayo nayiphi na enye into zonke i-Samsung Galaxy S6
Apha sikushiya usetyenziso lwe-Samsung Galaxy S6 kwifomathi ye-APK yokukhuphela kunye nokufakwa kwazo.
[Ividiyo] Umsebenzi ekusenokwenzeka ukuba ubungazi ngeMoto 360
Ngokuqinisekileyo ukuba awunayo i-Smartphone evela kumenzi weMotorola, njengam kude kube ngoku, ngekhe uwazi lo msebenzi weMoto 360.
Uwujonga njani umboniso wentsingiselo ye-Samsung Galaxy S6 «Galaxy Unpacked 2015»
Apha ubeke izihlalo kumqolo ongaphambili ukuze uzimase iGlass Unpacked 2015 bukhoma ngeCawe ezayo, umcimbi wokubonisa weSamsung ye-S6 entsha.
Umnyhadala wentetho ye-Motorola Moto E 4G, i-Unpacked Moto E 4G naphi na apho ukhetha khona!
Ukusuka kwi-Androidsis siyakumema kulo msitho ukhethekileyo, i-Unpacked Moto E 4G naphi na kwaye nanini na xa ufuna.
ILogitech X300, isithethi esinamandla kakhulu seBluetooth
Yimveliso ebonelela kakhulu kwindawo encinci, iyayazi indlela yokunika ukubaluleka kwezothutho kodwa nakwigunya esifuna ukuliva iindlebe zethu.
I-Motorola Moto E 4G entsha ngoku isemthethweni. Sikuxelela zonke iinkcukacha zobugcisa kunye nexabiso laseburhulumenteni
Sele sizazi zonke iinkcukacha ezisemthethweni zeMoto Moto E 4G entsha.
I-HTC One (M7) ifumana i-Android 5.0 Lollipop
I-HTC One M7 yaseYurophu sele ifumana i-Android 5.0 L, enobunzima obungama-805 MB kunye nokuphindwa kabini koYilo lweZinto
I-Lenovo Vibe Shot, i-smartphone yabathandi bokufota
Imifanekiso yokuqala ivuza, ukongeza kwiimpawu zobuchwephesha zeLenovo Vibe Shot, i-smartphone entsha yomenzi waseAsia
Isamsung ipapasha isibhengezo esitsha se-Samsung Galaxy S6
Isamsung ipapashe isibhengezo esitsha se-Samsung Galaxy S6 apho ibonisa khona iinkcukacha zeflegi yaseKorea elandelayo
Ibhetri ye-Samsung Galaxy S6 iya kuba yi-2.600 mAh
Yonke ingcaciso yebhetri ye-Samsung Galaxy S6 ihluziwe, eya kuthi ibenamandla angama-2.600 mAh.
IMoto 360 ngoku inokuthengwa kwiVenkile yeGoogle Play
IMoto 360 ngoku iyafumaneka kwiVenkile yokuDlala ngexabiso lama-euro angama-249.99, kunye ne-9.99 yokuhambisa iindleko
[Ividiyo] I-LG G2: Ungabuyela njani kwiKit Kat Rom esemthethweni evela kwi-Android esemthethweni iLollipop ngaphandle kwesidingo seFlash Izixhobo
Indlela yokubuyela kwi-LG G2 D802 ukusuka kwi-Android Lollipop ukuya kwi-Android Kit Kat esemthethweni ngaphandle kwesidingo seFlash Izixhobo kwaye ngaphandle kokuphulukana nokuBuyisa okanye iNgcambu.
[Ividiyo] Uyifaka njani i-CM11 kwiXiaomi RedMi Qaphela i4G eneXperience Qaphela nguXancin
Uyifaka njani i-CM11 kwiXiaomi RedMi Qaphela i-4G inyathelo ngenyathelo ngenyathelo kwiXancin evela kwiforum yeSIM ezimbini.
Zonke iimpawu kunye nezixhobo ze-HTC One M9 zivuzekile
Zonke iimpawu zobuchwephesha ze-HTC One M9 ziye zavuza ukongeza kwizinto eziza kuhamba ne-HTC elandelayo
Ndiyi-Galaxy elandelayo, i-teaser yokuqala malunga ne-Samsung Galaxy S6
Kwaye i-Samsung isandula ukupapasha i-teaser kwi-akhawunti yayo ye-Twitter apho idumisa khona ubuhle belensi entsha eya kuthi idibanise i-Samsung Galaxy S6. Ngaba iya kuba yimodyuli ye-megapixel engama-20 ezinomfanekiso ozinzileyo esiwubonileyo ngelo xesha?
[Ividiyo] Uyihlaziya njani i-LG G2 kwi-LG esemthethweni ye-Lollipop ye-LG
Apha ndikubonisa indlela yokuhlaziya i-LG G2 kwi-LG esemthethweni ye-Android Lollipop usebenzisa le Rom yesiqhelo yemodeli yaseKorea eya kusivumela ukuba sigcine iimvume zokuBuyisa kunye neMvume.
Ezi zinikezelo zibonisa ngokweenkcukacha indlela i-HTC One M9 / HTC Hima eya kujongeka ngayo
Ngoku, abafana boMyili weFowuni kwiwebhusayithi yabo, bapapashe uthotho lwezinikezelo ezibonisa zonke iinkcukacha zeHTC One M9. Ngaba oku kuya kuba kuyilo olucacileyo lwe-HTC elandelayo?
I-Samsung Galaxy Note 4 sele ifumana i-Android 5.0.1 ePoland
I-Samsung Galaxy Note 4 evela ePoland, kunye nenombolo yemodeli SM-910C sele ifumana i-Android 5.0.1 Lollipop
Yonke ingcaciso yeMoto E 2015 entsha ihluziwe
Ngoku lonke ulwazi malunga neMoto E 2015 entsha luvuzile, ukusuka kwimifanekiso engqina uyilo esilubonileyo ngelo xesha kwiimpawu zobuchwephesha zeMoto E 2015, isizukulwana esitsha sohlobo lomvelisi u-E osandula ukufunyanwa nguLenovo.
Ungayifumana njani imenyu efihliweyo yeeTheminali zeMoto Moto E, iMoto G kunye neMoto X
Apha ngezantsi ndicacisa iqhinga lokufikelela kwimenyu efihliweyo yeziphelo zeMotorola ezinje ngeMoto E, Moto G okanye iMoto X.
I-LG G3 VR: Iiglasi zokwenyani ze-LG ziya kufumaneka kwinyanga ezayo simahla kwabo bathenga i-LG G3
Kule nyanga inye, iiglasi zenyani ze-LG ziya kubakho, i-LG G3 VR, eya kuthi ibe simahla ngokupheleleyo kubathengi be-LG G3.
Ngokuqinisekileyo i-OnePlus iyasitshintsha isicwangciso sayo sokuthengisa isimemo
Mema ukuthengisa kube yimpumelelo kwiintsuku zayo zokuqala, kodwa ngokuthandwa njenganamhlanje, i-OnePlus kuye kwafuneka ifumane iindlela ezintsha zokuthengisa.
UMeizu uthengisa i-100.000 Meizu M1 kwakhona kwimizuzwana engama-60
UMeizu usebenzise inkqubo yokuthengisa yeXiaomi ukuthengisa iiyunithi ezingama-100.000 zeMeizu M1 ngomzuzu omnye.
IAlibaba ityale i-590 yezigidi zeedola eMeizu
Izinto zihamba kakuhle kakhulu kuMeizu. Iiflegi zayo zamva nje, iMeizu MX4 kunye neMX4 Pro,…
IMeizu ilungiselela iwatchwatch yoluhlu lwayo lweBlue Charm
IMeizu ilungiselela iwatchwatch yoluhlu lwayo lweBlue Charm. Isixhobo esinomjikelo wesetyhula kwaye siya kubonakala kwixabiso laso elinomtsalane
I-HTC One M7 sele ifumana i-Android 5.0
I-HTC One M7 sele ifumana i-Android 5.0, ke kwiveki ezayo uya kuba nakho ukuhlaziya isixhobo sakho nge-OTA.
I-enigmatic Xiaomi smartphone eneziphelo ezincinci zokuvuza, ngaba yiMi5?
Imifanekiso emitsha ikhutshiwe ngesixhobo se-Xiaomi esine-bezels zangaphambili. Ngaba iya kuba yi-Mi5?
I-OnePlus ipapasha i-infographic enomdla ebonisa impumelelo yayo
Ukubhiyozela impumelelo yenkampani bapapashe i-infographic yolonwabo ebonisa impumelelo ye-OnePlus ephunyezwe kunyaka ophelileyo ka-2014
I-Samsung Galaxy S6 iya kudibanisa inkqubo yayo yokuhlawula
I-Samsung Galaxy S6 kunye neGPS S6 Edge ziya kudibanisa eyazo inkqubo yokuhlawula, zisebenzisa iLoopPlay
I-Miui v6 esekwe kwi-Android Lollipop sele ivavanywa ngabavavanyi be-beta abambalwa
I-Rom Miui v6 entsha esekwe kwi-Android Lollipop sele ikwisigaba sokuvavanya, ukuqala ngeXiamo Mi 2, Mi 2a kunye neMi 2s.
Ityala le-Galaxy S6 libonisa utshintsho lwenzwa
Nangona i-Galaxy S6 ingekabikho ngokusemthethweni, inyani kukuba ezinye iimeko ziqala ukusibonisa iimpawu. Le yokugqibela ibonisa utshintsho kwiimvakalelo.
I-Oxygen OS, i-OnePlus entsha yeROM
I-Oxygen OS yindlela entsha elula, engenabloatware, kunye ne-ROM ecocekileyo yeefowuni ze-OnePlus eziza kwizixhobo zakho ezilandelayo.
Yiyo eyenzekayo xa indlovu inyathela kwi-HTC Desire EYE
Ucinga ukuba kuya kwenzeka ntoni ukuba indlovu inyathele i-HTC Desire EYE? Ngaba i-terminal iya kuphila phantsi koxinzelelo olukhulu kangaka
Indlela yokuqalisa i-Xiaomi RedMi Qaphela i-4G, esebenzayo kwi-Miui v5 kunye ne-Miui v6
Isifundo seVidiyo apho ndicacisa khona ukuba uyingcambu njani iXiaomi RedMi Qaphela i4G. Ivumelekile iMiui v5 kunye neMiui v6.
Uyifaka njani i-TWRP Ukubuyisela kwi-Xiaomi RedMi Qaphela i-4G, esebenzayo kwi-Miui v5 kunye ne-Miui v6
Namhlanje sikubonisa ngokweenkcukacha indlela yokufaka i-TWRP Ukubuyisela kwiXiaomi RedMi Qaphela i-4G
I-Qualcomm iqinisekisa ukuba umthengi omkhulu uyayishiya i-Snapdragon 810. Ngaba iya kuba yi-Samsung?
I-Qualcomm iqinisekisile ukuba umenzi omkhulu uyilahlile iprosesa yakhe ye-Snapdragon 810. Ngaba iya kuba yi-Samsung kunye ne-Samsung Galaxy S6 yayo?
Iinguqu zokugqibela zeMicrosoft Word, Excel kunye nePowerPoint ngoku ziyafumaneka kwiipilisi ze-Android
IMicrosoft isandula ukukhupha iinguqu zokugqibela zeLizwi, i-Excel, kunye nePowerPoint kwiVenkile yokudlala. Ludibaniso olukhulu
I-Samsung Galaxy Note 3 sele ifumana i-Android 5.0 L eRashiya
I-Samsung Galaxy Note 3 inokuyifumana i-Note 4 ngokufumana i-Android 5.0 L. Ngaphezulu ukuba sicinga ukuba inguqulelo yaseRussia ye-Galaxy Note 3 sele ifumana isabelo sayo seLollipop ngeSamsung Kies.
Ityala eliguqula iselfowuni yakho libe yiPolaroid, iPrynt, lifikelela kwiinjongo zalo kwiKickstarter
Enye yeeprojekthi ezinomdla kakhulu kwiikhamera zePolaroid kwiselfowuni, uPrynt, ibe yinyani kwaye ifikelele kwinkxaso mali kwiKickstarter.
Ubona ntoni emva kwe-Samsung Gear VR?
Ngaba ufuna ukwazi ukuba yintoni ebonwa ngasemva kwe-Samsung Gear VR? Kule ntengiso, i-Samsung izama ukukubonisa yona.
I-Samsung Gear VR ngoku inokuthengwa kwi-Best Buy nge $ 199
Ngoku singathenga i-Samsung Gear VR nge-199 yeedola ngephepha elisemthethweni lokuthenga okuSemthethweni.
I-ZTE Blade S6 ifika, eyokuqala i-Android nge-Snapdragon 615 octa-core chip kunye neLollipop ye- $ 250
I-ZTE Blade S6 iya konwatyelwa ngabasebenzisi bayo ngokuba ne-chip ye-octa-core chip engama-64, ikhamera ye-13MP kunye ne-2GB ye-RAM ye- $ 250
Uhlaziya njani iXiaomi RedMi Qaphela 4G kwi-MIUI V6 Android 4.4.4 Kit Kat
Ividiyo-tutorial ichaze inyathelo ngenyathelo ukuhlaziya iXiaomi RedMi Qaphela 4G kwi-MIUI V6 ene-Android 4.4.4 Kit Kat
IMeizu iveza iM1 Mini entsha: 5 ″ 720p, isikrini se-64-bit kunye nekhamera ye-13MP ye- € 99
UMeizu usandula ukubonakalisa iMeizu M1 Mini entsha, ifowuni ene-64-bit chip, ikhamera ye-13MP kunye ne-5MP ngaphambili malunga ne- € 99
Yongeza ukusebenza kokutshaja ngaphandle kwamacingo kwi-Samsung Galaxy Note 4 yakho
Isamsung yazisa ngezambatho ezintsha ezongeza ukutshaja ngaphandle kwamacingo kwi-Samsung Galaxy Note 4 yakho.
I-Xiaomi Redmi 2 entsha ene-2GB ye-RAM kunye ne-16GB yokugcina ifumana isatifikethi e-China
UXiaomi uzakwazisa ngenguqulelo entsha yeXiaomi Redmi 2 kungekudala nge-2 GB ye-RAM kunye ne-16 GB yokugcina. Zonke iitheminali ezinkulu
Zeziphi iiterminal ze-Android ozithandayo? Olu lukhetho lwam lobuqu
Nalu uluhlu lwam lwezinto endizithandayo ze-Android, uluhlu endihlala ndicebisa ngalo kubahlobo bam nakwabo ndibaziyo xa bendicela ingcebiso malunga ne-Android Smartphone yokuthenga.
Isidlali seGoogle Nexus siyafumaneka kwiAmazon Spain eSpain nge-169 Euro
Umdlali weNexus, ikhonsoli yevidiyo kaGoogle inokuthengwa eAmazon Spain nge-169 euro.
Sakaza usuka kwifowuni okanye ithebhulethi yakho kwiKhompyuter yakho ngoLawulo olubuthathaka
Ulawulo olubuthathaka sisixhobo esinezixhobo ezinamalungelo e-ROOT avumela ukuhanjiswa kwescreen sayo kwiPC
UXiaomi uhleka iApple ngentengiso entsha ehlekisayo
UXiaomi upapashe ividiyo ehlekisayo ehlekisa ngekhamera ye-iPhone 6 Plus, ethi gqi ngasemva kwisixhobo
Isamsung yazisa i-Galaxy A3 kunye neGPS A5 eSpain
Isamsung isandula ukuhambisa iimodeli zayo ezimbini zeGalaxy A4 kunye ne-Galaxy A3 eSpain kwiiyure ezi-5 ezidlulileyo ngenjongo yokujolisa kubaphulaphuli abancinci.
Ixabiso le-Samsung Galaxy J1 licociwe, ukhuphiswano ngqo kwiMoto G?
Ukusuka eRussia kwaye ngothando kuza ixabiso elicingelwayo le-Samsung Galaxy J1, indawo yesiphelo apho i-Samsung iceba ukujongana neMoto G 2014.
Kutheni uXiaomi ethengisa ixabiso eliphantsi kangaka?
Izizathu zokuba kutheni umenzi waseAsia uXiaomi enexabiso eliphantsi xa kuthelekiswa nabakhuphisana nabo abaphambili.
Ngaba ezihlangwini zikaXiaomi Redmi 2 ziya kuba ngcono nakwixabiso lemali?
Nangona ezona ntetho zakutshanje zeXiaomi zinempembelelo, umntu oza kungena ezihlangwini kwiRed Mi 2 angayenza nangakumbi, enokubiza ixabiso eliphantsi kwaye ibe nomgangatho.
I-Sony Xperia Z4 idlula kwiCCC
Ngokuqinisekileyo siyazi ngokuqinisekileyo ukuba umenzi waseJapan uzakuveza uluhlu olutsha lweeflegi ngexesha leNkomfa yeHlabathi yeFowuni eza kubanjwa kwiveki yokuqala kaMatshi kwisixeko saseBarcelona. Kwaye sinokuqinisekisa ukuba i-Sony Xperia Z4 idlulile kwii-arhente ezimbini zokuqinisekisa.
Impikiswano malunga nesantya sokulayisha kweprojekthi SONICable
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sikuxelele malunga neprojekthi eyi-SONICable ethembisa ukuphinda kabini isantya sokutshaja esiphathwayo. Namhlanje sikuxelela into efihliweyo emva kwesihloko.
Imihla yokuhlaziywa kwi-Android 5.0 yoluhlu lonke lwe-HTC icociwe
Imihla apho izixhobo ezifanelekileyo zeHTC ziya kufumana uhlaziyo ekudala lulindelwe kwi-Android 5.0 L sele ivuliwe
Kutheni ndicinga ukuba iXiaomi Mi Qaphela Pro ilunge kuneSamsung ye-Samsung 4
Inqaku elibonisa iimpawu zeMi Qaphela Pro esilahlekileyo kwi-Samsung Galaxy Note 4
Sele sinemizekelo yokuqala yeefoto ezithathwe ngeNqaku leMi
Sele sinemizekelo yokuqala yeefoto ezithathiwe ngekhamera yoluhlu olutsha lweXiaomi Mi Qaphela
IMi Box Mini, ukubheja kolunye uXiaomi kumxholo wemultimedia nge- € 30
IMi Box Mini iza ngenjongo yokudibanisa kwigumbi lakho lokuhlala ukuze uqhagamshele kwiscreen seTV nge-HDMI
Uyihlaziya njani i-Samsung Galaxy S2 kwi-Android Lollipop
Namhlanje ndicacisa inyathelo ngenyathelo indlela yokuhlaziya i-Samsung Galaxy S2 kwi-Android Lollipop enkosi kwizibuko le-CM12, eliza kunika ithuba lesibini kule ndawo inomdla ye-Samsung.
Uyihlaziya njani i-Samsung Galaxy S3 kwi-Android Lollipop
Namhlanje ndicacisa indlela yokunika ubomi obutsha kwisiphelo sakho se-Android kwaye ndikubonisa indlela yokuhlaziya i-Samsung Galaxy S3 kwi-Android Lollipop usebenzisa i-CM12.
I-HTC One M8 Developer Edition sele ifumana i-Android 5.0 L
I-HTC One M8 Developer Edition sele ifumana uhlaziyo ekudala lulindelwe kwi-Android 5.0. Oko kuthetha ukuba kungekudala bazokwazisa i-OTA yoluhlu olunye lomenzi waseTaiwan.
Uyihlaziya njani i-Samsung Galaxy S4 kwi-Android Lollipop usebenzisa i-CM12
Namhlanje ndicacisa indlela yokuhlaziya i-Samsung Galaxy S4 kwi-Android Lollipop usebenzisa iiROM ezisemthethweni ze-Android 5.0 Nightlys ezivela kwi-CM12.
I-CES 2015: I-ZTE S Pro 2, i-Mobile Hotspot, iProjektha kunye ne-Android Icebo Konke kwi-One
Namhlanje sibonisa i-ZTE S Pro 2 indawo yokufikelela eshukumayo kunye neprojektha kunye nesixhobo se-Android 4.4.2
Ungayihlaziya njani i-Samsung Galaxy S5 yeVodafone kwi-Android 5.0 Lollipop
Apha ngezantsi ndicacisa inkqubo emayilandelwe, ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo zokuhlaziya iVodafone Samsung Galaxy S5 kwi-Android 5.0 Lollipop.
Xiaomi Redmi 2, unayo eSpain nge-euro ezingama-150
IXiaomi RedMi 2 ngoku iyathengiswa, i-middle-range ye-smartphone evela kumenzi waseAsia onokuba nayo ekhaya nge-150 euro
I-LG kunye ne-Audi smartwatch isebenza neWebOS
Ngoku sikulethela umdla omangalisayo: i-smartwatch ye-LG eyenzelwe i-Audi isebenza ne-WebOS
Isamsung iPenvatars iza kungekudala kwiNqaku 4 kunye neNqaku le-4 Edge
I-Samsung Penvatars iya kuba semgceni wokuba yinyani ngokwenyani kumgaqo we-Samsung Galaxy qaphela 4 kunye neNqaku 4 Edge.
Uyihlaziya njani i-LG G3 kwi-Android 5.0 CM12 [Umzekelo D855]
Namhlanje ndicacisa indlela yokuhlaziya i-LG G3 kwi-Android 5.0 Lollipop usebenzisa iCyanogenmod 12, CM12
I-CES 2015: Ezi ziindaba ezivela kwi-ZTE
Kwesona siganeko sibaluleke kakhulu setekhnoloji sokuqala konyaka, e-CES 2015, basibonisa ukuba ziya kuba yintoni iindaba ezilandelayo ezivela kwi-ZTE.
Ngaba uyazithanda iipilisi ezinkulu? Ewe, eli rhamncwa liyi-intshi ezingama-65 liza kukuthanda
UFuhu ubonise e-CES 2015 eLas Vegas uthotho lwamacwecwe amatsha anemilinganiselo ukusuka kwi-intshi ye-45 ukuya kwi-65 kunye neprosesa ye-NVIDIA
Iinguqulelo zangaphambili zeapps zikaOfisi kaMicrosoft yeepilisi ze-Android esele zikwiVenkile yokudlala
Ukusuka kwiVenkile yokuDlala, iiOfisi zikaMicrosoft Office ezinje ngeLizwi, i-Excel kunye nePowerPoint ngoku ziyafumaneka kwiipilisi
Ukucaciswa ngokusemthethweni kwe-LG G Flex 2
Sele siyazi imigaqo esemthethweni ye-LG G Flex 2 evela kwilizwe laseKorea uqobo.
Ungayihlaziya njani i-LG G2 yakho kwi-Android 5.0 usebenzisa iCyanogenmod 12
Namhlanje ndikubonisa indlela yokuhlaziya i-LG G2 kwi-Android 5.0 enkosi kwi-CM12
I-Audi isebenzisa i-smartwatch entsha ye-LG kwinkomfa yayo yeendaba
U-Audi usebenzise i-smartwatch enqabileyo ye-LG ngexesha lenkomfa yeendaba. Kubonakala ngathi iya kuba ngumlindo owenzelwe ngokukodwa umenzi.
I-HTC Desire 320, isiphelo sendlela esisezantsi esiza kuvela kwixabiso laso elihlengahlengisiweyo
I-HTC ivelise i-smartphone yokuqala yonyaka: I-HTC Desire 320, isiphelo sendlela esiya kubandakanya elona nqanaba liphantsi kwicandelo.
I-LG G Flex 2: I-LG ibonisa umhlaba irhamncwa lalo elitsha kunye nekhusi eligobile
I-LG isandula ukuveza into elindelekileyo ye-LG G Flex 2015 kwi-CES 2, i-terminal enezinto eziyincomayo phezulu kwicandelo
Isamsung ifuna ukuphinda izivelise, ngaba i-Samsung Galaxy s6 iphawula ngaphambi nasemva?
Inqaku lezimvo malunga notshintsho i-Samsung ekufuneka ilwenzile ukubuyisa abaphulaphuli bayo nge-Samsung Galaxy S6
IHuawei Honor 6 Plus ngoku iyafumaneka kwi-345 euro
Ngoku sinokuthenga iHuawei Honor 6 Plus kwi-Oppo Mart ngexabiso elinomtsalane kakhulu: i-345 euros
Uhlaziyo kwi-Android 5.0 ye-Samsung Galaxy Note 3 icociwe
Ukuhlaziywa kwi-Android 5.0 L ye-Samsung Galaxy Note 3 SM-N9005 iye yavuza. Apha sichaza indlela yokuhlaziya i-terminal yakho
I-OnePlus One ifumana i-Android 5.0 ngokusemthethweni
Nangona uhlaziyo lusenazo iingxaki kuba isigaba se-Alpha, i-OnePlus One ifumana i-Android 5.0 ngokusemthethweni.